Mario Villén Lucena. Kubvunzana nemunyori weNazarí | Zvazvino Zvinyorwa
Mario Villén Lucena. Kubvunzana nemunyori weNazarí
Mufananidzo: Mario Villén Lucena. Facebook nhoroondo.
Mario Villen Lucena, Granada-akaberekwa genre munyori histori, yakatoburitsa zvinyorwa zvishoma. Yekupedzisira ndeye Nasrid, fungidziro nezve kuvambwa kwemamiririri eGranada, iyo inoperekedza Nhoo yeGranada y Mazuva makumi mana emoto, yakaiswawo panguva yacho. Ndatenda zvikuru nguva yako uye mutsa weizvi indavhiyu kwaanotaura nezvavo uye nezvese zvishoma zvishoma.
Mario Villén Lucena - Bvunzurudzo
BHUKU NEWS: Nasrid ndiyo yako nyowani nhoroondo nhoroondo genre. Chii chaunotiudza nezvazvo uye iyo pfungwa yakabva kupi?
MARIO VILLÉN LUCENA: Nyaya yakataurwa muNazarí Ndakasangana nazvo pandakanga ndichinyora bhuku rangu rekutanga, anopfuura makore gumi apfuura. Panguva iyoyo ndainzwa ndisina kugadzirira kuinyora, asi makore akati wandei gare gare, nekutora mifananidzo kwaitwa, ndakatanga kushanda pairi.
Mubhuku rino iyo hwaro hweNasrid emirate yeGranada uye nekwakabva imba youmambo yakaitonga kweanopfuura makore maviri nehafu. Nasir yekutanga emir yaive Ibn al-Ahmar. Mushure mehondo yeLas Navas de Tolosa, akakwanisa kuunganidza zvisaririra zveal-Andalus ndokuumba navo yakasimba emirate. Pakati pezvimwe zvinhu zvakawanda, akatanga kuvakwa kweAlhambra.
Kune rimwe divi remuganhu, nyaya ye Ferdinand III, Castilla naLeón vakabatana chaizvo uye vakakunda nzvimbo dzakakosha seCórdoba, Jaén neSeville.
MVL: Bhuku rekutanga randinorangarira ndichiverenga ndere Dhizaini uye mambo weArabia. Yakaburitswa muunganidzwa wevechidiki, asi ini handirangariri munyori.
Chinhu chekutanga chandakanyora chaive nhetembo yekufa, ane anopfuura zvishoma makore gumi nerimwe kana gumi nemaviri. Kusuwa zvishoma.
MVL: Ndichataura maviri: Amin maalouf y Tariq Ali. Ivo vaviri vakanyora inonakidza kwazvo nhoroondo yenhoroondo, nekutarisisa kukuru kune mavara uye manzwiro avo. Ndinoda nzira yavanorondedzera nayo. Ivo vaviri vakanyora nezve al-Andalus.
MVL: Umar, ivo Mumumvuri wedamba. Ini ndinofanira kubvuma kuti ndakazvitora sereferenzi yekuvaka imwe yevatambi vangu mu Nhoo yeGranada. Hunhu hwake hwakandifadza.
MVL: Ini ndinowanzo shandisa mimhanzi kunyora, kundikurudzira uye kubvisa ruzha runogumbura. Kupfuura izvozvo, ndinofunga hapana anokosha mania.
Nezve kuverenga kwangu, ini ndaiwanzoverenga mukati Kindle uye ndiri kutonga iyo percentage Kuverenga. Ndinoedza kumanikidza mutinhimira wezuva nezuva uye ndinoedza kutevedzera iwo, asi ini handina kana hanya nenyaya yacho futi.
MVL: Ini ndinofunga kushomeka kwenguva, huipi hwakajairika mazuva edu, zvinoreva kuti handina hunyoro hwakawandisa kana zvasvika pakunyora kana kuverenga. Kwese uye chero nguva zvakakosha. Kana ivo vakandipa sarudzo, ini ndinosarudza nyora chinhu chekutanga mangwanani, chingomutsa.
MVL: Iyo yenhoroondo ndiyo yandinofarira, asi ini ndinodawo iyo yazvino uno. Ndakaverenga chinenge zvese, asi panguva ino ini ndinongoda kunyora nhoroondo yenhoroondo. Mune ramangwana Ini handitonge kunze kuedza nevamwe vakomana.
MVL: Izvozvi ndiri kuverenga Murapi webhiza, ivo Gonzalo Giner. Ndiri kuchida.
Ndiri kuongorora chikamu chechinyorwa uye kunyora kune imwe nyowani. Ini ndinochengetedza dingindira ...
MVL: Tinorarama a nguva yakaoma munyika yekutsikisa. Kunyangwe denda risati rasvika, musika wainge wachinja. Iyo piracy yaita uye inoenderera mberi nekukuvadza kwakawanda. MuSpain iwe unoverenga zvakawanda, asi hautenge zvese zvaunoverenga. Iyo denda yakawedzera mamiriro ezvinhu kune vaparidzi. Mhedzisiro yacho inoramba ichionekwa, asi haina kutaridzika. Mune maonero angu, zvichaitwa bets zvimwe kuchengeteka, achatora njodzi shoma, kumhanya kuchapfupiswa uye kushoma kuchaiswa mari mukusimudzira.
MVL: Ini ndakaburitsa muna Chikumi 2020, pakati pehosha, nemashopu mazhinji akavharwa uye nekutonga kwenzvimbo yavakavhura. Rave rakaoma gore, asi Nasrid Izvo hazvina kuenda zvakashata zvachose. Izvo zvakanaka pane izvi zvese, izvo zvandinofunga zvatakatora kubva pane ino mamiriro kuti igare nesu, ndivo zviitiko chaipo. Mharidzo, misangano yekunyora, hurukuro ... Zvirambidzo zvakatimanikidza ku inonakidza imwe nzira kuti ini ndaizoda kuti izadzikise zviito zvechinyakare kana zvese izvi zvoitika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Mario Villén Lucena. Kubvunzana nemunyori weNazarí